ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ရဲတိုက်ကြီးများပြပွဲကို ၁၁ ရက်တိုင်တိုင်ပြသသွားမည်၊ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင် - Yangon Media Group
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ရဲတိုက်ကြီးများပြပွဲကို ၁၁ ရက်တိုင်တိုင်ပြသသွားမည်၊ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ‘ချက်ရဲတိုက်ကြီးများ ပြပွဲ’ကို အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်) တွင် ၁၁ရက်တိုင်တိုင်ပြသသွားမည် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ရဲတိုက်ကြီး ၁၂ ခုအနက် ခြောက်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းအပြင် ရဲတိုက်ကြီးစုစု ပေါင်း ၃၇ ခု၏ဓာတ်ပုံများ၊ ပန်းချီ များနှင့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများကိုလည်း ပြသထားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် အထိပြသမည်ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ မည်သူ မဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားပြတိုက် (ရန်ကုန်) မှ သိရသည်။
”ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Prague ပရပ်မြို့မှာရှိတဲ့ ပရပ်ရဲတိုက်ကြီးက တော့ အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။ ရှေးလည်းကျတယ်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတွေက ၃ဝဝ ခန့် ရှိပြီး သက်တမ်းအနေနဲ့ဆိုရင် နှစ် ပေါင်း ၁ဝဝဝ ခန့်နဲ့ ၁၉ရာ စုကရဲတိုက် ကြီးတွေများပါတယ်”ဟု ချက်သမ္မတ နိုင်ငံ၏ သံအမတ်ကြီး Jaroslav Dolecek က စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်တွင် အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်)၌ ပြုလုပ်သည့် ပြပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။ ‘ချက် ရဲတိုက်ကြီးများပြပွဲ’သည် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးပွဲတစ်ခုဖြစ် ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှအမွေအနှစ်များကို လည်း ယင်းနိုင်ငံတွင်သွားရောက်ပြ သရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ”ချက်နိုင်ငံက ကျွန်မတို့မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသားပြတိုက်မှာ ဒါပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် လာရောက်ပြသကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုလည်း ချက်နိုင်ငံမှာသွားရောက် ပြသဖို့ရှိပါတယ်”ဟု အမျိုးသားပြ တိုက်(ရန်ကုန်) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နန်းလောဝ်ငေးကပြောသည်။
ပြပွဲပြသခြင်းသည် ချက်သမ္မတ နိုင်ငံရှိ ရဲတိုက်ကြီးများအလှအပများကို ကြော်ငြာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ချက်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားပြတိုက်မှ ဒါရိုက်တာ Michal Lukes က ပြောသည်။ ‘ချက်နိုင်ငံက ရဲတိုက်ကြီးတွေ ရဲ့အလှအပကို ကမ္ဘာကသိပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ တွေမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကရဲတိုက် ကြီးတွေရဲ့အလှအပနဲ့ ထိန်းသိမ်း ထားမှုတွေကိုသိရှိအောင် လာရောက် ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ¤င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ မြန်မာ-ချက် နှစ်နိုင်ငံခရီး သွားလုပ်ငန်းသည် ယခုနှစ်အတွင်း သုံးဆစီမြင့်တက်လာပြီး ရှေ့ဆက်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ပြပွဲကိုကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မင်းတုန်းမင်းတြားကြီး နတ်ပြည်စံသက် (၁၃၉)နှစ်မြောက် ဆွမ်းဆက် ကပ်၊ ဝါတော်သက်တော်ကြီး ဆွေတော်?
ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကလေးဒေသထွက် ချင်းရိုးရာ အထည်များ ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပကပါ မှာယူမှု များပြာ??
ဆည်များကို ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဂရုတစိုက်စိစစ်ဖို့ လိုအပ်ဟုဆို
ဝမ်းတွင်းမြို့တွင် မော်တော်ယာဉ် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဆည်အတွင်း ထိုးကျ တိမ်းမှောက်
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ရေဘေးတုံ့ပြန် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အားဖြည့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အသင့်ရှိဟု ထုတ်ပြန်